Isantya sokuqhuba ukuTshintsha kweNtengiso | Martech Zone
Uziqhuba njani iZantya zokuTshintsha ukuThengisa
NgoLwesibini, nge-11 kaDisemba ngo-2012 Douglas Karr
Ungathini ukuba ubunako Yongeza uguquko ngama-391% ngokutshintsha into enye malunga nenkqubo yakho yokuthengisa? Leads360 ifumene iindlela zokwenza oko… Ngokunciphisa ixesha lokutshintsha lithatha umntu wakho othengisayo ukuba anxibelelane nethemba. Izixhobo zokunika amandla ukuthengisa ziqhuba amaxabiso okuguqula ngokuqinisekisa ukuba iinkqubo zisendaweni yokunxibelelana kunye nokuvala ithemba lakho xa sele bekulungele ukuthenga!
Nantsi i-infographic: Iinkqubo zentengiso ezikhuthaza ukuGuqulwa
Fumana iziphumo ezigcweleyo kunye nedatha oza kuyifaka kwishishini lakho, ukhuphele ikopi eyongezelelweyo yengxelo, Isicwangciso soQhakamshelwano sokuGqibela: Ungasisebenzisa njani ngokufanelekileyo isiFowuni kunye ne-imeyile yoQhakamshelwano kunye nempumelelo yokuGuqula.
tags: guqukaemailIntengiso ephumayoifowuniUkunika amandla ukuthengisa
Chase izibalo zokuthenga ngeeholide zika-2012 ukuza kuthi ga ngoku